I-Eureka, igajethi enomdla ongasayi kuze uphulukane nayo nezitshixo | Iindaba zeGajethi
I-Eureka, igajethi enomdla ongasoze ulahlekelwe zitshixo zakho, okanye nantoni na enjalo
UMiguel Hernandez | | Izixhobo, elektroniki, ngokubanzi, Reviews
Kwisixhobo se-Actualidad siyaqhubeka ukukuzisa ikakhulu ezo mveliso zenza ubomi bakho bube lula, ngakumbi ezo zijikelezwe yitekhnoloji kwaye ziyilelwe intuthuzelo yethu. Ngeli xesha sinento eza kuba yinto ekhethekileyo kuba ... ngubani ongalahlekelwanga ngamaqhosha ngamanye amaxesha? Oku kunokuba neentsuku zayo ezibaliwe ukuba uzama le mveliso.
Sinezandla zethu i-Eureka, isixhobo seSelfowuni onokuthi ufumane kuyo nantoni na elahlekileyo kwangoko kwiselfowuni. Hlala nathi kuba siza kubona ukuba i-Eureka iqulathe ntoni kwaye inokusisindisa nakweyiphi na intiyo.
Reolink C2 Pro, indlela ekrelekrele yokujonga ikhaya lakho [Uhlalutyo]
1 Incinci, iyaphatheka kwaye irhabaxa
2 Unako ukwenza ntoni u-Eureka?
3 Isebenza njani kwaye idibanisa njani no-Eureka?
4 Ixabiso le-Eureka kunye neendawo zokuthengisa
Incinci, iyaphatheka kwaye irhabaxa
Kubalulekile ukuba i-Cellularline Eureka incinci, kungenjalo sinokucaphuka kwaye ngaphezulu kwako konke, kuya kubacaphukisa ukuphatha, umzekelo, ezandleni zethu. Le mveliso iveliswe yi-Cellularline ngokubambisana neengcali zeFilo kwi-geopositioning kunye nemveliso ye-smart. Imveliso ilingana nobungakanani bengqekembe ye-euro ezimbini, ngaphantsi kweemilimitha ezilishumi ukutyeba kunye nobunzima obukhaphukhaphu kangangokuba ngokunyanisekileyo, akufanelekile ukuba sikhankanye, kutheni le nto siza kuphinda siyenze into enjalo.
Inika uyilo lweplastiki yePVC kunye Inikwa ngemibala emine: Mnyama, Luhlaza, Mhlophe kunye Bomvu. Ineqhosha elinye elinokudityaniswa kunye nelogo ye-Cellularline kwaye eya kuthi isebenze ukukhangela ngasemva, oko kukuthi, ukufumana i-smartphone yethu esidityaniswe nayo, kuba oku kuthatha ithuba lonxibelelwano. Bluetooth. Lo msebenzi ubandakanyiwe kwinani elifanelekileyo leemveliso ezinxitywayo ezinje ngeewatchwatches kunye nezacholo zemidlalo. Inerabha enganyangekiyo esiye sayivavanya kwaye isebenza njengehukuku, kuphela kuyo unako "ukuyibopha" ngokuthe ngqo apho ufuna khona.
Unako ukwenza ntoni u-Eureka?
Inesilumkiso, ke nge-smartphone siya kuba nakho ukwenza isandi sikwazi ukusifumana kwaye ngaloo ndlela siphinde sibuyele oko sikuphulukene noko sikudibanise ne-Eureka. Siza kufumana kwakhona kwiscreen indawo yokuma komhlaba ngeGPS eziza kubonisa indawo ethile apho sine-Eureka, oko kukuthi, umzekelo, kuya kusinceda ukuyifumana imoto ukuba asikhumbuli isitalato apho siyimise khona, ukunika umzekelo wento ethile esinokuyisebenzisa yonke imihla.
Ikwasebenza ekufumaneni i-smartphone yethu, lIzaziso zesandi ziya kuthunyelwa kwifowuni yethu xa sicofa iqhosha eliquka i-Eureka, ukuze sikwazi ukukhangela umva, endaweni yokufumana i-Eureka siyakufumana i-smartphone yethu. Kwenzeka into efanayo xa sisenza umsebenzi Indawo yokuthuthuzela, Oko kukuthi, siya kufumana isaziso kwi-smartphone yethu ukuba ifumanisa ukuba siphambuke kakhulu kwi-Eureka okanye kuloo nto sincamathele kuyo i-Eureka, ngaphandle kwamathandabuzo ezi zezona zicelo zisebenzayo esizifumene kwi-Eureka , Kodwa ngokuqinisekileyo ezinye zinokuvela ngakumbi kuxhomekeke kwiimfuno zomsebenzisi ngamnye.
Isebenza njani kwaye idibanisa njani no-Eureka?
Ewe, ilula, ibinokwenzeka njani enye into le Eureka inesicelo kwi-smartphone yethu apho siya kuba nakho ukufumana yonke incindi, unokuzikhuphelela zombini iOS ukuba kunjalo Android ngokulula ngokusebenzisa ivenkile yesicelo esemthethweni, ngaphandle kwengxaki. Nje ukuba sizikhuphele ngaphandle kokuqhubeka nokudibanisa isixhobo sethu se-Eureka ngokulula, into endiyithandayo kanye yindlela elula yokwenza lo msebenzi.
Sivula usetyenziso kwaye sikhethe ukubanokongeza i-Eureka entsha, emva koko siya kucofa kwaye sibambe iqhosha le-Eureka Ngelixa iscreen sisibonisa kwaye kwimizuzwana embalwa siza kukhupha isandi esibonisa ukuba i-Eureka ifakwe kakuhle kwaye siya kuba nakho ukwenza isandi se-Eureka kwiscreen kwaye siyicofe ngeGPS. Yindlela elula esiya kuyenza ukuba isebenze. Faka ibhetri yebhetri enokutshintsha indawo eqhubeka malunga neenyanga ezilishumi, kunye Uluhlu lwezenzo lumalunga neemitha ezimashumi mathathu, ke ayinako ukugcwaliseka kwakhona, nangona kungenangqondo kwaphela.
Ixabiso le-Eureka kunye neendawo zokuthengisa
Le Eureka iqala ukusuka kwi-19,99 euro kwaye ungayithenga ngeendawo zentengiso eziqhelekileyo kunye neziqhelekileyo zeCelluarline IWorten, iMediaMarkt, iCarrefour kunye ne-El Corte Inglés. Akukwazeki ukuyithenga ngeAmazon okanye kwiwebhusayithi yeCelluarline uqobo, nangona siza kuhlala siphaphile xa kunokwenzeka ukuba nayiphi na indawo yentengiso ekwi-intanethi yongezwa kwaye ke senze izinto lula kuwe ngokongeza ikhonkco apha. Ukuba uthengile okanye uceba ukufumana i-Cellularline Eureka, ungasishiya imibuzo yakho kuTwitter wethu (@I-agadget) okanye ngqo kwibhokisi yezimvo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » I-Eureka, igajethi enomdla ongasoze ulahlekelwe zitshixo zakho, okanye nantoni na enjalo
I-SCUF Prestige ngumlawuli omtsha weScuf yeMidlalo yeXbox yeXbox